Indlu yeDolophu yoMlinganiswa. Uxolo, iindwendwe ezifihliweyo kuphela
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguNigel & Fiona
Sikufutshane nombindi wesixeko kwiivenkile, iindawo zokutyela & zentselo. Ngaphaya kocingo kukho iCornwall Park enegadi, iiaviary, iihambo nokunye. Uya kuyithanda indawo yethu ngenxa yendawo ezolileyo onokuthi uyiphonononge ngeebhayisekile zethu ezinembeko, ipaki yemoto yakho ngasemnyango wangaphambili, ibhedi epholileyo eshushu, ukhetho lweBambillo okanye imiqamelo esemgangathweni, eyakho iSmart TV, ukufikelela ngaphandle komnyango. igumbi lokulala ukuya egadini kunye negumbi lakho lokuhlambela elinololiwe oshushu wetawuli & wamkelekile ngokufudumeleyo ngokulinganayo kubamkeli bakho!
Igumbi lakho lokulala, igumbi lokuhlambela kunye nempahla ekwabelwana ngayo ibekwe kumgangatho ongaphantsi kanye ecaleni komnyango wangaphambili ukuze ufikeleleke ngokulula kwaye kude nendawo yokulala yabamkeli bakho abaphezulu. Onke amagumbi oluntu asezantsi.
4.96 ·Izimvo eziyi-202
4.96 · Izimvo eziyi-202
Umbuki zindwendwe ngu- Nigel & Fiona
Sobabini sinemisebenzi phakathi evekini kodwa sivulelekile ukonwabela ixesha kunye nawe njengoko likhona okanye sikuvumela ukuba wonwabele imfihlo yakho. Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukukunceda ngokufanayo kwaye senze ukuhlala kwakho kube ngamava amnandi angalibalekiyo!
Sobabini sinemisebenzi phakathi evekini kodwa sivulelekile ukonwabela ixesha kunye nawe njengoko likhona okanye sikuvumela ukuba wonwabele imfihlo yakho. Siza kwenza konke okuseman…
UNigel & Fiona yi-Superhost